Fontaprepitant dimeglumine (EMEND) ntụ ntụ (265121-04-8) | AASraw
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) ntụ ntụ
Rating: SKU: 265121-04-8. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Fontaprepitant dimeglumine (EMEND) powder (265121-04-8), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Fosaprepitant Dimeglumine ntụ ntụ bụ ụdị nnu dimeglumine nke onye na-emepụta ihe, mmiri na-esi mmiri, N-phosphorylated prodrug nke na-enweghị atụ, na-arụ ọrụ antiemetic. N'elu nchịkwa dị nfe na ngwangwa ngwangwa ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, onye ọrụ a na-ejikọta ihe ndị mmadụ na-enweta na P / neurokinin 1 (NK1) na ndị ntinye aka n'ime etiti (CNS). Nke a na - egbochi onye na - enweta ihe nkwụkọ nke ihe na - adịgide adịgide P ma na - egbochi ihe ahụ P na - emepụta.
Fimaprepitant dimeglumine (EMEND) ntụ ntụ isi agwa
aha: Fimaprepitant dimeglumine (EMEND) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5
Molekụla arọ: 1004.83
Melt Point: 242-247 ° C
Nchekwa Nche: -20 Celsius C Freezer
agba: ọcha na-acha ọcha ọcha amorphous
Onye na-ejide onwe ya na-ejikọta ya (EMEND)
Fosaprepitant dimeglumine ntụ ntụ (CAS 265121-04-8)
Ngwunye ntụ ntụ nke dimeglumine
Na ndị ọzọ antiemetic mmadụ, maka mgbochi nke nnukwu na-egbu oge ọgbụgbọ na vomiting metụtara mbụ ma na-ekpegharị ọmụmụ nke ukwuu na moderately emetogenic cancer chemotherapy, gụnyere akwa-cisplatin dose.
Ịdọ aka ná ntị na EMEND ntụ ntụ (CAS 265121-04-8)
A ghaghị iji nlezianya jiri ndị na-agwọ ọrịa na ndị ọrịa na-enweta ọgwụ ndị na-enye obi ụtọ bụ ndị a na-ejikọta site na CYP3A4.
Mmetụta mmeghachi omume nke ọkpụkpụ nwere ike ime n'oge infusion. Ndị ọrịa n'ozuzu ha nabatara nkwụsịtụ. A naghị atụ aro ya iji mee ka infusion ahụ kwụsị. (B)
Nchịkọta nke onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ nke na-enweghị nsogbu na aghafarin (mkpụrụ ndụ CYP2C9) nwere ike ịkpata ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama na International Normalized Ratio (INR) nke oge prothrombin. (C)
A pụrụ ime ka nrụpụta ọgwụ mgbochi hormonal n'oge ahụ nakwa maka ụbọchị 28 na-esote ngwụcha ikpeazụ nke onye na-emepụta ihe ma ọ bụ na-enweghị ike ịkọwa ya. A ghaghị eji ụzọ ọzọ ma ọ bụ azụ azụ nke iji mgbochi ime. (D)
A: CYP3A4 Interactions Onye na-emepụta ngwa ngwa na-agbanwe ngwa ngwa ka ọ bụrụ onye na-enweghị isi, nke bụ onye na-eme ihe nkwụsịtụ nke CYP3A4 mgbe a na-eme ya dị ka usoro ntinye usoro antiemetic dosage nke CINV. A ghaghị iji nlezianya jiri ndị na-arịa ọrịa na-enweta ọgwụ ndị na-enye obi ụtọ bụ ndị a na-ejikọta site na CYP3A3. Ntuchi nke CYP4A3 site na onye na-enweghị isi ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọdịmma mmadụ nwere ike ime ka nchekasị plasma dị elu nke ọgwụ ndị a. Mgbe ejiri ya na onye ọzọ na-eme ihe na CYP4A3 concomitantly, enwere ike ibuli elu ọnụ plasma. Mgbe ejiri ọgwụ na-eme ihe na-adịghị mma na-eme ka ọrụ CYP4A3 rụọ ọrụ, enwere ike ịkụlata uche concents plasma, nke a pụkwara ime ka nrụpụta ọrụ ghara ịdị irè. Ndị ọrụ chemotherapy nke CYP4A3 maara nke ọma na-agụnye docetaxel, paclitaxel, etoposide, irinotecan, ifosfamide, imatinib, vinorelbine, vinblastine na vincristine. N'ọmụmụ ihe ọmụmụ, a na-ejikarị usoro ndị na-ekwu okwu ọnụ na etoposide, vinorelbine, ma ọ bụ paclitaxel. A naghị edozi usoro nke ndị ọrụ a iji kọọ akụkọ maka mmekọrịta ọgwụ ọjọọ. N'ọmụmụ ọgwụ pharmacookinetic dị iche iche, a chọpụtaraghị mgbanwe mgbanwe na-emetụta ọrịa na docetaxel ma ọ bụ vinorelbine pharmacokinetics mgbe a na-ejikọta ọnụ ọgụgụ na-ekwu okwu ọnụ. N'ihi obere ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrịa na ọmụmụ ihe ọmụmụ nke natara CYP4A3 substrates vinblastine, vincristine, ma ọ bụ ifosfamide, nlezianya na nlezianya anya na-agwa ndị ọrịa na-anata ndị ọrụ a ma ọ bụ ndị ọzọ na-agwọ ọrịa chepụtara nke CYP4A3 na-agụghị.
B: Mmeghachi omume nke ịchọta ihe dị iche iche Nkọwapụta nke mmeghachi omume ngwa ngwa dị iche iche gụnyere flushing, erythema, dyspnea, na anaphylaxis mere n'oge infusion nke onye na-azụ ahịa. Mmetụta ndị a na-eme ka ndị mmadụ na-emeghachi omume na-emekarị ka ha kwụsị ịṅụ ọgwụ na ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. A naghị atụgharị uche na ntinye aka na ndị ọrịa nwere ahụmịhe ndị a n'oge mbido oge.
C: Njikọ aka na Warfarin Ịchịkọta onye na-achọ ọrụ ma ọ bụ na-enweghị agha na aghafarin nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama dị na International Normalized Ratio (INR) nke oge prothrombin. Na ndị ọrịa na usoro ọgwụgwọ na-adịghị ala ala, a ghaghị nyochaa nke ọma na INR na nsonye 2-izu, karịsịa na 7 ruo 10 ụbọchị, mgbe ịmalitere onye na-enweghị ihe ọ bụla na usoro ọkpụkpụ ọ bụla.
D. Ọchịchị na Hormonal Contraceptives Mgbe coadministration na onye na-achọ ọrụ ma ọ bụ na-enweghị isi, nrụpụta nke ọgwụ mgbochi hormonal nwere ike belata n'oge na maka 28 ụbọchị na-agbaso usoro ikpeazụ nke ma ọ bụ onye na-enweghị ihe ọghọm ma ọ bụ onye na-enweghị isi. Ụzọ ọzọ ma ọ bụ azụ azụ nke iji mgbochi ime ihe kwesiri iji ya mee ihe mgbe a na-agwọ ya na maka ọnwa 1 na-esote ọkpụkpụ ikpeazụ nke onye na-enweghị ihe ọghọm ma ọ bụ na-enweghị isi [lee Drug Interactions]. 5.5 Na-aga n'ihu Na-aga n'ihu Na-eji ihe eji eme ihe na-aga n'ihu na EMEND ntụ ntụ maka ọgwụ ogwu maka igbochi ọgbụ na vomiting adịghị atụ aro ya n'ihi na a amụtabeghị ya; na n'ihi na profaịlụ nke mmekọrịta ọgwụ ọjọọ nwere ike ịgbanwe mgbe ọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu.
A na-egosiputa Fosaprepitant dimeglumine ntụ ntụ maka ọgwụ 150 mg na ndị okenye yana ndị ọzọ antiemetic maka mgbochi nke ọgbụgbọ na igbu oge na-emetụta mbido na usoro nke MEC. Ngwadogwu a kwadoro na ndị okenye bụ otu mkpụrụ ọgwụ 150-mg (IV) na-agbanye 20 ruo 30 nkeji ihe dị ka nkeji 30 tupu chemotherapy na Day 1. Nkwado FDA nke ihe ngosi ọhụrụ a dabere na akụkụ nke nchoputa site na usoro, usoro, doubleblind, onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enyocha ihe nyocha dị ka otu nsị nke intravenous na njikọ ondansetron na dexamethasone (nke a na-akpọ EMEND ntụ ntụ) (N = 502) ma e jiri ya tụnyere ondansetron na dexamethasone naanị (usoro nchịkwa) (N = 498) na ndị ọrịa na-anata MEC. Ebumnuche bụ isi bụ nzaghachi zuru oke (akọwapụtara dị ka enweghị nsị na ojiji nke nnapụta nnapụta) na oge na-egbu oge (25 ruo 120 awa na-esote nnabata nke chemotherapy) nke ọgwụ na-akpata ọgbụgbọ na ọgbụgbọ. A hụrụ 78.9% ọnụego nzaghachi zuru ezu na Fosaprepitant dimeglumine ntụ ntụ iji tụnyere 68.5% na usoro njikwa (P <0.001). mmeghachi omume kachasị emetụta na-egosi na ike ọgwụgwụ (15% vs 13%), afọ ọsịsa (13% 11%), neutropenia (8% 7%), asthenia (4% 3%), anaemia (3%) 2%), ọrịa neuropathy leukopenia (2% 1%), ọrịa dyspepsia urinary tract na mgbu mgbu njedebe 1%).
A na - egosi ndị okenye maka nkwụsị nke ịṅụ ọgwụ, na ndị ọzọ na - egbochi ọrịa antiemetic, maka igbochi nnukwu ọgbụgba na vomiting na - ejikọta ihe ọmụmụ nke mbụ ma na - emegharị ihe banyere ọrịa cancer na - emetogenic, gụnyere akwa cisplatin; na maka mgbochi nke ọgbụgbọ na vomiting jikọtara na mbụ ma na-ekpeghachi ihe ọmụmụ nke ọrịa cancer emetogenic moderately.
Akwụsịghị ịṅụ ọgwụ mgbochi dimeglumine maka ọgwụ ogwu maka ọgwụgwọ nke ọgbụgbọ na ịme agbọ.
Fimaprepitant dimeglumine Powder Powder (CAS 265121-04-8)
Fosaprepitant dimeglumine ntụ ntụ Marketing
Esi esi zụta Fuelpitant dimeglumine ntụ ntụ: zụta EMEND ntụ ntụ site na AASraw